War Deg Deg Ah Xildhibaanada Baarlamaanka oo Codka Kalsoonida kala noqday Xukuumada Soomaaliya - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa soo gaba gaboobay Codkii ay Xildhibaanada Baarlamaanka u qaadayeen Xukuumada Soomaaliya, waxaana Kulanka Baarlamaanka fadhiyay Xildhibaano gaaraya 235-Xildhibaan.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo kulanka Shir gudoominayay ayaa Codeynta kadib shaaciyay natiijada kasoo baxday codkii loo qaaday Mooshinkii laga soo gudbiyay Xukuumada Soomaaliya.
Prof Jawaari ayaa sheegay in Kulanka ay goob joog ahaayeen Xildhibaano gaaraya 235-Xildhibaan waxaana codkii la qaaday Mooshinka kalsooni kala noqoshada ogolaaday Xildhibaano gaaraya 153-Xildhibaan, waxaa diiday Mooshin 80-Xildhibaan halka 2-Xildhibaanada ay ka aamustay.
Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa sheegay in Baarlamaanka Soomaaliya ay codka kalsoonida kala noqdeen Xukuumada Soomaaliya, waxa uuna Xildhibaanada uga mahad celiyay sida quruxda badan ay hooshooda u guteen.
Kulanka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kusoo dhamaaday jawi dagan, waxaana la arkayay Xildhibaanada mooshinka taageersanaa oo isku hambalyeenaya halka aan farxad laga dareemeyn Xildhibaanadii taageersanaa R/Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya.
Waxii Warar ah ee amuurtan kusoo kororta kala soco Wararkayaga Dambe Insha Allah.
Daawo fanaaniinta saan maa u danbeysay iney is dhuuqaan sida gaalada